Manchester United Oo Ka Badisay Liverpool Kana Reebtay Koobka FA-Cup-ka
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo ka badisay Liverpool kana reebtay Koobka FA-Cup-ka
Liverpool's Mohamed Salah (second right) scores his side's second goal of the game during the Emirates FA Cup fourth round match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday January 24, 2021.
Kooxda Manchester United ayaa markale ku jirta guulaheeda isdaba jooga ah iyadoo 3-2 uga badisay Liverpool kulan ka tirsan Koobka FA-Cup-ka.
Inkastoo Liverpool ay daah furtay Goolasha kulanka hadana waxay Manchester United ugu danbeyn Koobka ka reebtay Kooxda Liverpool oo markaan ku jirta waqtigeeda ugu Xuma.
Mo Salah ayaana hogaanka u dhiibay Liverpool Daqiiqadii 18 aad ee ciyaarta ka hor inta uusan ka bareejeenin Mason Greenwood Daqiiqadii 26-aad ee Ciyaarta iyadoo lagu kala nastay 1-1.
Manchester United ayaa Qeybta Danbe hogaanka Qabatay Daqiiqadii 48-aad ee ciyaarta waxana u dhaliyay goolka Marcus Rashford lakin xidiga Mo Salah ayaa goolkiisa labaad ka dhaliyay Manchester United isagoo ciyaarta ka dhigay 2-2.
Bruno Fernandes oo badal ku soo galay Ciyaarta ayaana Manchester United ka caawiyay guusha isagoo goolka Sadexaad dhaliyay Daqiiqadii 78-aad.
Manchester United ayaa kulankeeda xiga la ciyaaridoonta Kooxda Sheffield United kulan ka tirsan Horyaalka Premier league Halka Liverpool ay booqandoonto Tottenham isla Horyaalka.